'कलकारखाना बेचेर युवाहरुलाई खाडी मुलुक जान बाध्य बनाउने नेपाली कांग्रेस हो' Canada Nepal
क्यानाडा नेपाल पौष २६ २०७८
काठमाडौं । संखुवासभाको खाँदबारीमा आयोजित नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन र पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंले सम्बोधन गरेका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता प्रसाईंले नेपाली कांग्रेसको कारण देशका ठूला कलकारखाना बेचियो र युवाहरु विदेशिन वाध्य भएको आरोप लाएका छन् ।
खाँदबारीमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेता प्रसाईंले प्रश्न गर्दै भने, "भृकुटी कागज कारखाना २०४९ साल कार्तिक ५ गते बेचियो, सरकारमा को थियो ? काँग्रेस हो की होइन ? हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना कार्तिक १४ गते २०४९ सालमा बेचियो, सरकारमा को थियो ? काँग्रेस हो की होइन ? त्यसको ठिक १० दिन पछि अर्थात २०४९ साल कार्तिक २४ गते बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना सौदाबाजिमा पर्यो, सरकारमा को थियो ? काँग्रेस हो की होइन ? त्यसको ठिक बर्ष दिन नबित्तै बालाजु कपडा उध्योग २०५० साल मंशिर १७ गते बेचीयो, सरकारमा को थियो ? काँग्रेस हो की होइन ? पूर्वको झापा र इलामका सातहज्जार बिगाहा चिया कमानहरु बेचेर खाने गर्ने काँग्रेस हो कि होइन ?"
नेता प्रसाईंले कांग्रेसको पालामा बेचिएको उधोग र कलकारखानाहरु पुनस्थापना अब नेकपा एमालेले गर्ने उल्लेख गर्दै भने, "तपाइहरु ढुक्क हुनुहोस् नेकपा एमालेले कांग्रेसका पालामा बेचिएका उध्योग धन्दा कलकारखानाहरुको पुनस्थापना गरेर देशमा औध्योगिक युगको सुरुवात गर्ने छ । विदेशमा रहेका एक करोड बढी नेपालीहरुलाई आफ्नै देशमा रोजगारीको अबसर दिएर घर फिर्ती गर्ने अभियानको सुरुवात एमालेले गर्नेछ । हामी गर्नेछौं । हाम्रो पार्टीले गर्नेछ । हामी सँग त्यो योजना छ । हामीलाई आफु बन्नु छैन हामी देश बनेको हेर्न चाहन्छौं । खाडिको ५० डिग्रिको भुँङ्ग्रोमा पसिना बगाउने नेपाली दाजु भाईहरु हाम्रै देशमा फर्केर काम गर्ने बाताबरण सृजना गर्नेछौं त्यसको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ । "
दुर्गा प्रसाईंले नेपाली कांग्रेसले २०४८ साल देखि २०६० साल सम्म कलकारखाना बेच्ने काम मात्र गर्यो तर केपी ओली सरकारमा भएको ३ वर्ष मै विकासका कयौं कामहरु गरेर देखाएको स्मरण समेत गराएका छन् । केपी ओलीले बर्षौदेखि थन्केर बसेको हुलाकी राजमार्ग चौडा पार्ने काम, पूर्व पश्चिम लोकमार्गको सुरुवात, पूर्व पश्चिम रेलमार्गको अवधारणा, काठमाण्डौ लगायतका प्रमुख सहरहरुमा सडक बालबालिकाहरुको व्यवस्थापना देखि स्वर्गिय नेता मनमोहनले एक सय रुपैयाबाट सुरु गरेको बृद्ध भत्ता चार हजार सम्म पुर्याएको कुरा नेता प्रसाईंले प्रष्टाएका छन् ।
दुर्गा प्रसाईंले अब जनताले कांग्रेस र माओवादीबाट देश विकास हुदैन भनेर बुझिसकेको जिकिर गर्दै अब हरेक जिल्लाबाट हजारौं माओवादीका कार्यकर्ताहरु एमालेमा प्रवेश गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । अब केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन युवाहरु एक जुट भएर लाग्नुपर्ने बताउंदै नेता प्रसाईंले अबको निर्वाचनमा एमालेको बहुमत आउने विश्वस्त समेत पारेका छन् ।
आज आयोजित कार्यक्रममा हजारौं माओवादी कार्यकर्ताहरु नेकपा एमाले पार्टी प्रवेश गरेका छन् । माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड मात्र हावी भएको गुनासो गर्दै युवाहरु अब एमालेलाई जिताएर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तर्फ लाग्ने बताएका छन् ।
दुर्गा प्रसाईंले आफू देशभरिका जिल्ला पुगेर माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबाट निराश भएका जनताहरुलाई उत्साह भर्दै एमाले पार्टी प्रवेश गराउने योजना समेत कार्यक्रम मार्फत सुनाएका छन् । अब देश बनाउने विकल्प भनेको नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओली नै हो भन्दै देशलाई एमालेमय बनाउने अठोट व्यक्त गरेका छन् ।
पौष २६, २०७८ सोमवार १४:५०:३३ बजे : प्रकाशित
राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनमा जनमोर्चालाई गठबन्धनको फाइदा, पायो एक सदस्य
काठमाडौं - राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाएको छ । बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जनमोर्चाका उममेदवार लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चाका तुलप्रसाद बिक निर्वाचित भएसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य राष्ट्रिय सभामा भएका हुन् ।
जनमोर्चाबाट प्रतिनिधि सभामा एक जना सदस्य छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल प्रतिनिधि सभामा एमाले- माओवादी गठबन्धनबाट २०७४ सालको प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
माघ १२, २०७८ बुधवार १९:०१:०६ बजे : प्रकाशित
जनकपुरधाम - मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका उम्मेदवार मोहम्मद खालिद विजयी भएका छन्। उनी गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए।
बुधबार सकिएको निर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार खालिदले एमाले उम्मेदवार उसमान अन्सारीलाई पराजित गरेका हुन् ।
सिराहाका खालिदले ६,६७८ मतभार ल्याएर विजयी भएका हुन् भने अन्सारीले २,७६६ मतभार प्राप्त गरे ।
माघ १२, २०७८ बुधवार १९:४९:३१ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि आज भएको १९ पदको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ ।
पदावधि सकिन लागेका १९ राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि आज सात वटा प्रदेशमा निर्वाचन भएको थियो । जसको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको हो ।
निर्वाचन भएका १९ सदस्य मध्ये एमालेका ८, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका ४/४ र कांग्रेसका ३ सदस्यको आगामी २० फागुनमा पदावधि सकिँदैछ ।
आजको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले सकिन लागेको आफ्नो कोटाको ८ मध्ये १ सिटमात्र जोगाएको छ भने बाँकी ७ सिट गुमाएको छ । एमालेले गुमाएको सात सिट गठबन्धनका पाँच दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले पाएका छन् ।
माघ १२, २०७८ बुधवार २०:१७:५३ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभाका १९ सिटको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणा सार्वजनिक भएको छ । जसमा अधिकांश सिटमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
१९ सिट मध्ये एक पदमा मात्र नेकपा एमाले उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रदेश एकमा भने एक सिटमा एमाले उम्मेदवार विजयी भएका हुन् । प्रदेश १ मा गठबन्धनबाट जसपाका उम्मेदवार हेमराज राई पराजित भएका छन् । अपांगता वा अल्पसंख्यकतर्फको सो पदमा एमालेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा निर्वाचित भएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको आजको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले गठबन्धन गरेर साझा उम्मेदवारी दिएका थिए ।
कर्णालीबाट राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनका तीनजनै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । उनीहरुले एमालेका उम्मेदवारलाई पराजित गरेका हुन् ।निर्वाचनमा अन्यतर्फ उदय बोहोरा (एकीकृत समाजवादी), अपांग/आदिवासीतर्फ नरबहादुर विष्ट (माओवादी केन्द्र) र महिलातर्फ दुर्गाकुमारी गुरुङ (कांग्रेस) निर्वाचित भएका हुन् ।
गण्डकीबाट गठबन्धनका ३ जनै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । महिला कोटामा कांग्रेसकी कमला पन्त, अन्य र दलित कोटाबाट माओवादी केन्द्रका सुरेश आलेमगर र भुवनबहादुर सुनार निर्वाचित भएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भए । गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका युवराज शर्मा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट महिलामा राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र जनमोर्चाको तर्फबाट दलित उम्मेदवार तुलप्रसाद विश्वकर्मा निर्वाचित भएका हुन् ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिममा पनि गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भए । सुदूरपश्चिमबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एकीकृत माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भए ।
महिलातर्फ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मदन कुमारी शाह (गरिमा), दलिततर्फ एकीकृत माओवादी केन्द्रका जगत पार्की र अन्य समूहबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नारायणदत्त मिश्र विजयी भएका हुन् ।
मधेश प्रदेशबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल र जनता समाजवादी पार्टीका महम्मद खालिद सिद्धिकी निर्वाचित भएका छन् ।
वाग्मती प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीकी गोमादेवी तिमल्सिना र कांग्रेसका कृष्णप्रसाद पौडेल निर्वाचित भएका छन् ।
माघ १२, २०७८ बुधवार २०:२४:५१ बजे : प्रकाशित
दाङ - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विद्यार्थीकालका राजनीति समकक्षी पहिलो पटक सांसद बनेका छन् । देउवाका समकक्षी बाँकेका युवराज शर्मा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक सांसद बनेका हुन् । नेपाल विद्यार्थी संघमा देउवा केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा शर्मा केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिए ।
राजनीति सहयात्री देउवा ५ पटकसम्म देशका प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि शर्मा भने पहिलो पटक सांसद बनेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लुम्बिनीबाट उनी निर्वाचित भएका हुन् । २०२७ सालमा भारतको बनारशबाट प्रतिनिधि भएर नेपाल विद्यार्थी संघको काठमाडौं महाधिवेशनमा उनी सहभागी भएका थिए । २०२८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा यिनै शर्मा उपाध्यक्ष भएर काम गरेका थिए ।
उनी बाँके कांग्रेसको सभापति बाहेक अरु ठूलो पदमा अहिलेसम्म पुगेका थिएनन् । ओझेलमा रहेका शर्मालाई यस पटक देउवाले राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनाएका हुन् । कांग्रेस बाँकेका पूर्वसभापति समेत रहेका ७१ वर्षीय शर्मालाई कुनै बेला पार्टी सदस्यता नरहने गरि कांग्रेसले कारबाही गरेको थियो । त्यसपछि सुशील कोइरालासँगको राजनीतिक टकरावले शर्मा राजनीतिमा उदाउन सकेका थिएनन् ।
२०४५ देखि २०४९ सालसम्म उनी कांग्रेस बाँकेको सभापति थिए । पार्टीमा योगदान धेरै भए पनि विगतदेखी हरेक अवसरबाट उनी बञ्चित हुँदै आएको उनका सहकर्मी बताउँछन् । पञ्चायत विरोधी गतिविधी गरेका कारण उनी २०२४ सालमा पहिलो पटक जेल समेत परेका थिए । २०२४ सालपछि पटक–पटक गरेर आफू ३/४ वर्षजति जेल बसेको उनी बताउँछन् ।
देउवाका साथी, सुशीलसँग वारपार
पार्टीको राजनीतिमा रहँदा उनको नेता सुशिल कोइरालासँग सुरुमा राम्रै सम्बन्ध थियो । २०४८ सालपछि भने कोइरालासँग वैचारिक द्वन्द्व सुरु भयो । कोइराला राजनीतिमा अगाडी बढ्दै गए । तर, शर्माले पार्टीको जिल्ला सभापति बाहेक अरु कुनैपनि पद पाएनन् । कोइराला र शर्माबीच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा उनले राजनीतिक अवसर नपाएको बताइने गरिएको छ । कोइरालाले शर्माको ठाउँमा अन्य नेतालाई अगाडी सारेर सांसद बनाए । शर्मालाई पार्टीले एक पटक पनि सांसदको टिकट दिएन । पार्टीले टिकट नदिएपछि उनी २०५१ सालमा क्षेत्र नम्बर १ र २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत बनेका थिए ।
शर्माले बाँकेको क्षेत्र नम्बर ३ बाट पार्टीको राजनीति गर्दै आएका छन् । उनी कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा बाँकेको क्षेत्र नम्बर ३ बाट खसआर्य कोटामा महाधिवेशन प्रतिनिधी सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए ।‘राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएपछि शर्माले संवैधानिक र पार्टीको दायित्व पूरा गर्ने बताएका छन् ।
माघ १२, २०७८ बुधवार २१:०९:४३ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०७८ को अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छ । १९ रिक्त पदमा बुधबार सम्पन्न निर्वाचनमा ४३ जना चुनावी मैदानमा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आजको निर्वाचनमा १९ मध्ये १८ पदमा गठबन्धनका उम्मेदवार र १ मा एमाले उम्मेदवार विजयी भए । कसले कति मतभार पाए ? हेर्नुस् निर्वाचन आयोगको सूची
माघ १२, २०७८ बुधवार २१:२५:५४ बजे : प्रकाशित